စပိန်လို တပုဒ်၊ English လို တပုဒ် ပါလာမဲ့ D.O. ကိုယ်တိုင်သေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ Solo album | Asia News Bar
စပိန်လို တပုဒ်၊ English လို တပုဒ် ပါလာမဲ့ D.O. ကိုယ်တိုင်သေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ Solo album
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ D.O. ရဲ့ solo album က မကြာခင် ထွက်ရှိတော့မှာပါနော်။ EXO official page က teaser ပုံလေးတွေ ညစဉ် ၉ခွဲတိုင်း မှန်မှန်တင်ပေးနေသလို album မှာပါမဲ့ သီချင်းလေးတွေရဲ့ အကြောင်းလည်း SM က တင်ပေးနေပါတယ်။D.O. ရဲ့ 1st mini album နာမည်ကတော့ Empathy ဖြစ်ပြီး ၈ပုဒ်တောင် ပါဝင်ပါတယ်။
Title track ကတော့ “Rose” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းစာသားကို D.O. ကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ထားတယ်လို့သိရပြီး သီချင်းအမျိုးအစားကတော့ acoustic folk song ပါတဲ့။ သီချင်းအကြောင်းအရာကတော့ တစုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားပြီး သတ္တိရှိရှိနဲ့ Ro ဆန်ဆန်ဖွင့်ပြောတော့မဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထို “Rose”သီချင်းကို English Version နဲ့လည်း သီဆိုထားပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် D.O. ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းကတော့ “I’m Fine” ပါ။ Jazz ဂီတ R&B type ဖြစ်ပြီး ဒီသီချင်းရဲ့ စာသားလေးတွေမှာ သူ့ရဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေ ကို ဖော် ပြထားပြီး သူက သူ့ကိုယ်သူ Hello ဆိုပြီး နှုတ်ဆက် တဲ့ အကြောင်း လေးရေးထားတာပါ။
Album ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ” It is Love ” သီချင်းကတော့ Latin-based acoustic pop song အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စာသားတွေဟာ အချစ် က တခါတလေ စိတ်ပျက် စရာကောင်းပေမယ့် နောက်တစ်ခါတော့ ထပ်ရှာကြည့်ချင်မိတဲ့ အကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ ပြီးတော့ Album ရဲ့ Bonus သီချင်းလေးအဖြစ် It is Love ရဲ့ Spanish Ver ” Si Fueras Mía’ ” ကို ထည့်ထားပါတယ်။
Global Fan တွေအတွက် ရေးစပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Global Music ပရိသတ်တွေကို သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ အချစ်ဝန်ခံမှုလေးကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ နားဆင်စေချင်လို့ပါတဲ့။ D.O. ဟာ 2014 တုန်းက music bank in Mexico မှာ “Sobor Ami” စပိန်သီချင်းကိုဆိုဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတာမို့ ခု သူ့ကိုယ်ပိုင် စပိန်သီချင်းလေးလည်း နားထောင်ကောင်းမှာ အသေအချာပါဘဲ။
Album ထဲက နောက်ထပ် သီချင်းတစ်ပုဒ် ကတော့ I’m Gonna Love You ပါ။ ဒီ သီချင်း လေးက Medium Tempo Pop Song အမျိုး အစား ဖြစ်ပြီး rhythmic guitar နဲ့ catchy melody ကို သုံးထားပါတယ်တဲ့။ Wonstein က featuring သီဆိုထားပြီး Wonstein ရဲ့ unique ဖြစ်တဲ့အသံနဲ့ D.O. ရဲ့ အသံချိုချိုလေး တွဲစပ်ပြီးသာ နားထောင်လိုက်ရရင်တော့ တော်တော်မိုက်နေမှာပါ။
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ 나의 아버지 (My Dad) နဲ့ My love လည်း နားထောင်ကောင်းအုံးမှာ အသေအချာပါဘဲ။ My Dad ကတော့ D.O. ရဲ့ အဖေအကြောင်း ရေးထားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခုလို သီချင်းကောင်း ၈ ပုဒ်ပါဝင်တဲ့ “Empathy” album ဟာ July လ 26 ရက်နေ့ 6pm KST မှာ ထွက်ရှိမှာပါ။
Album ဟာ photobook Ver တစ်ခု Digipack version2ခု (Blue & Gray) ရှိပြီး ကြိုတင်အော်ဒါတင် လို့ရနေပါပြီ။ D.O. ဟာ korean fan တွေအတွက်သာမက International fan တွေ အတွက်ပါ စဉ်းစားပြီး English လို တပုဒ်၊ စပိန်လို တပုဒ်ပါ ဆိုထားတာမို့ ပရိသတ်ကြီးတို့ အားပေးရကျိုးနပ်မှာပါ။
Source: EXO official page
Next တောင်ကိုရီးယား သမ္မတကိုယ်တိုင် သမ္မတရုံး အထူးသံတမန်အဖြစ် ​ခန့်အပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ BTS »
Previous « မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့ အခက်တွေ့သွားရတဲ့ The Golden Hairpin ဇာတ်လမ်းတွဲ
Japan နိုင်ငံမှာ Kpop အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ BTS နဲ့ TWICE ရဲ့ ကျော်ကြားမှုက ဘယ်လောက်တောင်ရှိသလဲ?
Hannam ရပ်ကွက်က ​​​စျေးအကြီးဆုံးအိမ်ရာမှာ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုက်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင် RM နဲ့ Jimin
၃ နှစ်အကြာမှာ album အသစ်နဲ့ ပရိသတ်​ရှေ့ကို ပြန်လာ​တော့မယ့် IU
Jin အတွက် လတ်တလော ပရိသတ်တွေပေးထားတဲ့ နောက်ထပ်နာမည်ပြောင်သစ်တစ်ခု
James Corden တစ္ေယာက္ Harry Styles နဲ႔ Jimin့ Jimin ဘယ္သူ႔ကိုေရြးမလဲ?
Forbes ကနေဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအများဆုံး အနုပညာရှင်စာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ BTS